बारे – 2माछा
घर / बारे
2fish.co पुरुष र महिला एक कम्पनी हो, केही क्याथोलिक पूजाहारीहरू सहित, dedicated to defending and explaining the Catholic faith–विशेष रोमन क्याथोलिक विश्वास–कारण र सत्य माध्यम.
सबै हाम्रो साइट अन्वेषण गर्न स्वागत र परमेश्वरको सन्देश र हाम्रो व्याख्याहरु पढ्न. तपाईं पनि लागि प्रश्नहरू पेश गर्न स्वागत हाम्रो “एक पूजाहारी सोध्छन्” पृष्ठ वा मनपर्ने पेश गर्न प्रवचन. हामी उत्तर पोस्ट र शिघ्रतिशिघ्र सामग्री स्वीकार गर्नेछ, तर हामी एक स्वयंसेवक संगठन हो, र प्रत्येक सदस्य छ (कम से कम) एक पूर्ण-समय काम.
सम्भव को हदसम्म, हाम्रो सन्देश स्वागत र दुनियावी छ, कहिल्यै क्याथोलिक चर्च को केन्द्रीय tenets धोखा बिना. विभिन्न मसीही गुटको बीचमा मतभेद भन्दा बढी समानता छन्, र हामी ती समानता celebrate जबकि, हामी पनि हामी जस्तै हामी के विश्वास र अभ्यास किन व्याख्या हुनेछ.
हामी स्पष्ट मा यो सबै गर्न आशा, सरल अंग्रेजी.
हामी नाम छनौट “2माछा” किनभने डबल अर्थ.
पहिलो, यस को चमत्कार जस्तै (दुई) माछा र (पाँच) चार सुसमाचारको पुस्तकका प्रत्येक देखिन्छ कि रोटी, हामी धेरै केही स्रोत संग गर्न सक्छन् जस्तै धेरै मान्छे असर गर्न चाहनुहुन्छ. त्यसैले, स्प्रिंगस्टीन गाउँछन् जस्तै, “हामी countin छौं’ एक चमत्कार मा।”
दोस्रो, हाम्रो अनौपचारिक माध्यम (सम्भव को हदसम्म), सकारात्मक, समावेशी (र, आषा, प्रेरक) सन्देश, हामी केही माछा फसाउन आशा, पनि. हामीलाई सम्पर्क थप जानकारीको लागि.